विपीका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. कलवारलाई निलम्बनको तयारी, तीन डाक्टरलाई सचेत गराइने - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ विपीका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. कलवारलाई निलम्बनको तयारी, तीन डाक्टरलाई सचेत गराइने
विपीका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. कलवारलाई निलम्बनको तयारी, तीन डाक्टरलाई सचेत गराइने
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७८ चैत्र १ गते, १८:३९ मा प्रकाशित
काठमाडौं—विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. रोशनप्रसाद शाह कलवारलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तीन महिना निलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । काउन्सिल स्रोतकाअनुसार डा. कलवारले बिरामीको शल्यक्रियाको क्रममा अवाञ्छित तथा गैरकानुनी कार्य गरेको र चिकित्सकीय आचरणको न्यूनतम मापदण्ड पालना नगरेको भन्दैं निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २९ पुसमा एक बिरामीको शल्यक्रिया गरी स्टील (साइन नेल) लगाउने विषयमा विवाद भएको थियो ।
काउन्सिलले उक्त घटनामाथि छानविन गर्न समिति बनाएको थियो । सो छानविन समितिमा काउन्सिलका आचारसंहिता तथा स्वास्थ्य समिति संयोजक डा. हरिहर वस्ती संयोजक, काउन्सिलका सदस्य डा. कालुसिंह खत्री र हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गणेश गुरुङ सदस्य रहेका थिए ।
सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलको पूर्ण बैठकले डा. कलवारलाई तीन महिना लागि व्यवसायिक कार्य गर्नका लागि निलम्बन किन गर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । साथै, काउन्सिलले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हाडजोर्नी विभागबाट प्रयोग गरिने र विदेशी दातृ संस्थाबाट प्राप्त हुने साइन नेल सम्बन्धि आवश्यक निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बिरामीको उपचारमा संलग्न अन्य दुई चिकित्सक डा. अमित विक्रम शाह र डा. अमित लिम्बुलाई आइन्दा त्यस्ता गतिविधीमा संलग्न नहुन सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, आफ्नो विभागमा पटक—पटक यस्ता विवाद हुँदा पनि त्यसलाई निरुपण गर्न नसकेको भन्दै विभागीय प्रमुख डा. विक्रम श्रेष्ठलाई पनि सचेत गराउने निर्णय भएको छ ।